🥇 ▷ Sababta ay tahay inaad u diido & # 039; t taleefoonka ha kaaga dillaacin habeenka oo dhan ✅
Sababta ay tahay inaad u diido & # 039; t taleefoonka ha kaaga dillaacin habeenka oo dhan
Waagii hore waqtiga khuraafaadka iyo dhagaxa weyn ee Nokia 3210 ama hormuudka Alcatel One Touch, Baatariyada mobilada ayaa socday maalmo mararka qaarna waxaa jira kuwa iyagu isbuucii qaatay iyaga oo aan wax lacag ah laga qaadin, maaddaama aan loo adeegsan si joogto ah sababtoo ah arrinta isku-dheellitirka ee si dhaqso ah looga isticmaalo wada-hadalka iyo taabashada. Laakiin xilligan casriga ah, marka taleefanka casriga loo isticmaalo wax walba, laga soo bilaabo internetka illaa iyo in la ciyaaro in muddo ah, iibsashada khadka internetka, shaqeynta, baahinta tooska ah, iwm, madaxbannaanida ayaa ah welwelka ugu weyn, maadaama baytariyada macno ahaan ay duuliyaan oo ay waajib tahay in la dallaco maalin kasta.
Maaha fikrad fiican inaad ka baxdo ku dallaca taleefanka gacanta
Sheyga sida shaashadda -lama in kurta inteeda badan mobilada oo dhan-, GPS-ka ama haysashada khadka tooska ah maalinta oo dhan ayaa ka dhigaya baytariga si dhakhso leh. Dad badan, the ku xir taleefanka nalka una daa inuu ku buuxiyo habeen dhan Waa dhaqan maalinle ah, laakiin miyay ku fiican tahay isweydaarsiga, mise tilmaamtaas sahlan ayaa gaabinaysa noloshaada? Daraasad lagu sameeyay websaydhka Battery ee jaamacadda wuxuu ku soo gabagabeeyey inay jiraan qodobo gacan ka geysan kara sii xumaanshaha batteriga, kuwaas oo ka ciyaari kara ka soo horjeedda madax-bannaanida marinka.
Maalmahan, batteriga taleefanka casriga ah wuxuu soo dallacayaa ugu badnaan laba saacadood. Xaqiiqdii tikniyoolajiyad Xaraash Degdeg ah waxaan haysan karnaa 100% dib u soo celin ah 45-60 daqiiqo. Maxaa ku dhacaya saacadaha intiisa kale ee taleefanka gacantu koronto ku xirmo inta aan hurudno? Thanks to software-ka ku rakiban aaladda, markii batteriga la dhammeeyo howsha qaadashada ayaa joogsata. Tan waxaa loo hirgaliyay si batteriga uusan ugu dhaawacmin kuleylka sababtoo ah kuleylka kuleylka, laakiin lafteeda kama horjoogsato batteriga laftiisa inuu sameeyo kuleylka.
Soo Koobid xaddiga batteriga uu taleefanka gacantu lumiyo iyadoo kuxiran heerkulka ay gaadhay inta lagu gudajiray soo iibsiga
Iska jir guryaha iyo daboollada
Waana taas eKuleylka kuleylka waa shey taxaddar leh, maadaama haddii aan dib ugu soo celinno daboolka dushiisa – xitaa waxaa jira dad iyagu sariirkooda ku yaal iyo barkinta hoosteeda – waxaan xadaynaynaa awoodda batterigaaga inuu si buuxda u buuxiyo. Tusaale ahaan, Haddii batteriga wareega uu gaaro 40 digriiheerkulka s inta lagu gudajiro hawsha dib u buuxinta muddo 1 sano ah, markii aan dib u buuxinno taleefanka oo aan 100% shaashadda ka helno, runtii batteriga Kaliya waxay dib u soo ceshan doontaa 65% awoodeedii.
Haddii heerkulka dib u buuxinta ee Terminalka 60 is uu sii socdo sidaas ilaa iyo inta aan ku dallacaynno 3 bilood, markaa batteriga wuxuu lumin doonaa ilaa 40% Miyey xun tahay haddii aan ka tago taleefanka casriga ah ee ku xiran labka dhadig habeennimo xitaa saacado kadib markii lagu soo oogay? Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato waa goorta la dalaco taleefanka gacanta, kaliya maaha inaad caado u yeelatid inaad ku xidho habeen kasta.
Ku haynta batteriga inta u dhexeysa 40% iyo 80% ayaa lagula talinayaa, sidaa darteed haddii ay sii soconayso maalinta oo dhan dambigeeda dami (kaas oo adiga kugu habboon). Haddii aadan ogeysiin waxaad had iyo jeer iska hubin kartaa adoo ku dallacaya moobaylka oo aad aragto haddii ay gaadho 100% inay joojiso kululaynta, taasi waa in terminalku laftiisa uu joojiyay dallacaadda.